पायल्स रोगबाट कसरी बच्ने? (जानी राखौं घरेलु उपाय।) – Chakra Jwala
Posted on 18 Oct 2015 by Chakra Bhandari
pic: How to cure piles naturally?
– प्रशस्त पानी पिउने (१ घण्टा = १ गिलास)।
– दैनिक ४५ मिनेट–१ घण्टा हलुका पसिना आउने गरेर शारीरिक व्यायाम गर्ने जस्तैः योग/आसन, रिड व्यायाम, (aerobic exercise) अंग व्यायाम आदि ।
– हप्तामा एक पटक आवश्यकता अनुसार पेट सफा गराउने (एनिमा लिने) र कब्जियत हुन नदिने । शरीरले पचाउन सक्ने गरी मात्र खाना खाने ।
– चिल्लो, पिरो, तारे–भुटेको, मसालेदार परिकार नखाने । शौचालय गईसकेपछि वा सुत्नु अघि तोरी/जैतुनको तेल गुहद्वारमा लगाउने ।
तातो, पिरो, मसालेदार, बासी खाना, मासु, अमिलो, आलु, सखर, डिब्बा बन्द परिकार, चिया, कफी, रक्सी, चुरोट, ब्राण्डी, आदि नखाने ।
पायल्समा भोजन एंव पोषण तालिका :
बिहान ५.३० बजे : पानी २ गिलास, लसुनको केशरा २, ३ वटा खाने ।
७.०० बजे : मुनक्का या छोहरा ५० ग्राम (७ छण्टा पानीमा भिजाईएको ) खाने ।
बिहान १०.११ बजे : रातो चामलको भात १०० ग्राम : दाल १० ग्राम (अंकुरित मुङ्ग, मेथि, चना, सबभन्दा राम्रो) ।
तरकारी ३०० ग्राम जस्तै सिजन अनुसारको परवर, लोका, करेला, घिरौला हरियो सागसात मेथी, चम्सुर, बेथे, खादि प्रशस्त खाने । सलाद २०० ग्राम जस्तै काक्रो, गाँजर, मुला, चुकन्दर, आदि काँचो खानमिल्ने खानेकुराहरु ।
दिउँसो ३.०० बजे : कुनै एक
बेलुका ८.०० बजे: गहुँको सुख्खा रोटी २, ३ वटा । तरकारी, चट्नी बिहानको जस्तै (बेलुका दाल नखाने)
नोट : पानी दिनभरीमा ३ देखि ४ लिटर सम्म पिउने । हरियो सागपात, फलफूल, तरकारीहरुको प्रशस्त प्रयोग गर्ने। खाना राम्रोसँग चपाएर खाने, नुन र चिल्लो कम खाने ।
नोटः- रोगी हुनु भन्दा पहिले नै प्राकृतिक उपचार र जीवनशैली परिवर्तनबाट निरोगी रहौं । खानामा रोटी, भातको मात्रा २०/४०% र हरियो सागसब्जी+सुपको मात्रा ६०/८०% हुनु जरुरी छ ।
(गैह्रे प्राकृतिक स्वास्थ्य अस्पताल र वेलनेस अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर हुन्)
Join me>> facebook & twitter
Previous Post बडा दशैं २०७४ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!
Next Post भारत–चीन द्रूत मार्गको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गुल्मी खण्डको काम पुरा